I-Marina-Front Apt +Amachibi eSimbo sokuHlala ePeña Mar - I-Airbnb
I-Marina-Front Apt +Amachibi eSimbo sokuHlala ePeña Mar
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguChristian
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uChristian iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yiza uhlale e-Condo Azul, eyona nto ifanelekileyo iFajardo kufuneka ibonelele, kweyona Complex ikhuselekileyo neyanamhlanje. Apha ePena Mar Ocean Club, amaziko angcono kuneendawo ezininzi zokuchithela iiholide! Indawo ephangaleleyo kwaye ehonjiswe ngokunambitheka ngombono omhle, ongenamda we-marina, i-Condo Azul ifanelekile kwiintsapho, izibini kunye naliphi na iqela labahlobo. Ibekwe ngaphaya kwesitrato ukusuka eVilla Marina, apho unokufumana khona ijet-ski kunye neCatamaran tours ezithatha ukuba uhambe nge-snorkeling kumanzi aguquguqukayo e-Icaco nasePalomino.
Yindlu ecocekileyo, entle, efana nehotele kwindawo ekhuselekileyo kufutshane neelwandle ezintle, iibha & neendawo zokutyela apho uya kuba nexesha elimnandi imini nobusuku. Ngowona mava amnandi, ifulethi lixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya i-Intanethi ye-Speed ePhezulu, iiTV ze-HD-Smart kunye neprogram yeHD kuwo onke amagumbi (kubandakanya i-balcony) kunye neeyunithi ze-AC kuwo onke amagumbi. Ikhitshi lixhotyiswe ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nezongezelelekileyo. Izincedisi zaselwandle ezifana neetawuli kunye nezitulo zinikiwe. Iitawuli zegumbi lokuhlambela, izomisi zeenwele, kunye nezinto eziluncedo ezinjengesepha, ishampoo kunye ne-conditioner zibandakanyiwe.
4.84 · Izimvo eziyi-161
Yindawo yokuhlala entle ebekwe kufutshane nemivalo kunye neendawo zokutyela ezinje ngeLa Ola, Pasión por el Fogón, El Varadero, & el Bohío. Ukuqhuba okufutshane kuya kukusa eMarina Puerto del Rey kunye ne-los Kioskos de Luquillo apho kuhlala kukho ukutya okumangalisayo kunye nobomi basebusuku. Ukuba uziva unomdla kwaye ufuna ukusondela ngakumbi kwindalo, ungaya e-El Yunque Ihlathi leMvula elikwimizuzu engama-25 ukusuka kwindlu. Unokuthatha ukhenketho lwe-catamaran ukusuka eVilla Marina ngaphaya kwesitrato ukusuka ePeña Mar, apho baya kukuthatha uhambe nge-snorkeling ukuya kwiziqithi ezintle ezikufutshane. Ekugqibeleni, indawo yokuhlala yimizuzu emi-5 ukusuka elwandle lweeLwandle eziSixhenxe kunye ne-Hotel El Conquistador
My name is Christian & I’m 23. I enjoy traveling, adventuring, reading, eating out & enjoying the night-life. As a host, I aim to be as attentive to detail as possible to e…
Iihostele ezimbini ziyafumaneka imini yonke.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fajardo